MDC Yotungamidza Minamato Ichikumbira Nyadenga Kuti Apindire
Mbudzi 29, 2010
Nekouna kuoma kwaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe, bato reMDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai raparura hurongwa hwemunamato wekukumbira nyadenga kuti vatungamire mukuburitsa nyika mumatambudziko ayiri.
Bato iri rinoti nyika yatambura zvikuru iri mumaoko evanhu venyama, avo vava kusiya nzira dzaMwari. Imwe nhengo yeMDC yaudza Studio7 kuti bato iri richatanga nemunamato pose panoungana nhengo dzebato iri dzichikurukura zvematongerwo enyika pamwe nezviri kunetsa munyika.
Chirongwa cheminamato yeMDC chinotanga panguva iyo mutungamiri weSouth Africa, uye vari muyananisi mugakava reZimbabwe, VaJacob Zuma, vanonzi vakati vanoda kuona sangano SADC richishanda pamwe neZimbabwe Electoral Commission musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rinouya, kuitira kuti pasave nekudeuka kweropa sezvakaitika musarudzo dza2008.
Bepanhau repa internet reRadioVop rinoti VaZuma vakaudza mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti vasori pamwe nemasoja havafanirwe kuve nechekuita musarudzo.
Chipangamazano chaVaZuma, Muzvare Lindiwe Zulu, vanotiwo mutungamiri weZambia, uye vari sachigaro weSADC Troika, VaRupiah Banda, vari kutarisirwa kupinda muSouth Africa neChitatu kuti vapirwe nezverwendo rwaVaZuma kuZimbabwe.
VaZuma vakanga vari muZimbabwe svondo rapera apo vakasangana nevatungamiri vatatu vari muhrumende yemubatanidzwa. Rwendo rwaVaZuma rwakaitika kuZimbabwe mushure mekunge SADC Troika yatadza kukurukura nyaya yeZimbabwe kumusangano wayakaita kuBotswana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari Programs Manager weCrisis in Zimbabwe Coalition, VaPedzisai Ruhanya, vanoti MDC-T haifainirwe kudaidza Mwari kuti vapindire iyo isati yagadzirira.